Madaxweyene Xasan Sheekh iyo Shariif Xasan oo wada hadalo siyaasadeed u bilowday - Somalia Focus
Madaxweyene Xasan Sheekh iyo Shariif Xasan oo wada hadalo siyaasadeed u bilowday
by Hassan Ali | Monday, Jan 16, 2017 | 170 views
16,January,2017(SofoNews) Tan iyo markii dhawaan baarlamanka uu doortay guddoon cusub ayaa waxaa soo baxayay walwal uu soo wajahay madaxweyne Xasan Sheekh kadib markii laga guuleystay Faarax Sheekh C/qaadir oo taageero u ah isaga.
Sida warku sheegayo wadahadaladan ayaa yimid ka dib markii madaxweyne Xasan uu soo fuulay culeys la xiriira codadka xildhibaanada taageersan oo sii yaraanaya taasi oo keentay in wada hadalo uu la furo Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Guul darada Faarax ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu ka qeyb qaatay Shariif Xasan oo ka careysnaa doorashada uu ku soo baxay gudoomiye Jawaari oo isaga ka reebtay inuu u tartamo doorashada madaxweynaha, iyadoo Shariifku uu taageerayaal badan ku leeyahay baarlamanka.
Xildhibaanada, ayaa ku kala feker duwan murashaxiinta u taagan madaxtinimada dalka, waxayna caqabad ku noqon kartaa qorshaha uu Madaxweynuhu ku doonayo kalsoonida Xildhibaanada.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa la sheegay in markii uu ogaaday arrimahan uu go’aansaday inuu wadahadalo la galo shariif Xasan si uu u helo codadka xildhibaanada taageersan, waxaana taas bedelkeed jira balan-qaadyo la xiriira jagooyin sare oo la siinayo taageerayaasha shariifka haddii uu guuleysto Xasan Shiikh. Wadahadalada ayaa socda weli iyadoo wax natiijo ah aysan ka soo bixin illaa hadda.
Wararka hoose ayaa tilmaamay in uu jiro culeys siyaasadeed oo ay ku hayaan madaxweyne Xasan Sheekh musharixiinta kala ah, Shariif Sheekh Axmed, C/qaadir Cosoble, Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) iyo Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Musharixiint aintoodi badan ayaa u muuqda in aysan ka dhab ahayn tartanka balse ay ku jiraan olole ay ku doonayaan in midba midka ugu dhow uu codka ku taageero.
Diyaar garowga doorashada madaxweynaha oo laga dareemayo Muqdisho
War deg deg ah: diyaarad uu leeyahay Turkiga oo ku burburtay dalka Kasakistaan